Mayelana NATHI - Shijiazhuang Wonderfu Rehabilitation Device Technology Co., Ltd.
IShijiazhuang Wonderfu Rehabilitation Device Technology Co., Ltd. Itholakala eTianshan Wanchuang Industrial Park, esifundeni saseLuancheng, eShijiazhuang City, eHebei, eChina, ezokuthutha ezilula nemvelo enhle, imizuzu engama-20 kuphela ukuya eShijiazhuang Railway Station nemizuzu engama-45 ukuya esikhumulweni sezindiza iShijiazhuang Airport.
Inkampani yami ibhizinisi lokucwaninga nokuthuthuka lobuchwepheshe obuphakeme, elineminyaka engaphezu kwengu-12 yesipiliyoni sobungcweti ekukhiqizeni nasekuthengiseni izingxenye zokufakelwa nezokuthambekela, ezinjengokwenziwa ngonyawo, izinhlobo zokuhlangana kweqakala, ukuhlangana kwamadolo, ukuhlangana kwe-hip nezinhlobo ze-orthotic ukuhlangana kwamadolo, ukukhiya kweSwitzerland, ukukhiya indandatho, ukukhiya ngemuva njll. Ukusizakala kwethu kungumkhiqizo ophelele wezinhlobo, ikhwalithi enhle, intengo enhle kakhulu, insizakalo yokuthengisa ngemuva, futhi ngokukhethekile Sinamaqembu wethu Wokuklama Nentuthuko, bonke abaklami banothile abacwaningwe ngokuhlolwa kokufakelwa kanye nemigqa ye-orthotic, Ngakho-ke singanikeza ngokwezifiso kochwepheshe (insizakalo ye-OEM) nezinsizakalo zokuklama (isevisi ye-ODM) ukuhlangabezana nezidingo zakho ezihlukile. Esikhathini esizayo esiseduze, Sizokwethula ikhwalithi ephezulu kakhulu, idivaysi yokuvuselela kabusha emakethe, ngethemba ukuthi wonke umngani uzobathanda.
Manje yonke imikhiqizo yethu ine ukuthekelisa emazweni angaphezu kwama-50 kuwo wonke umhlaba, ngakho-ke wamukelekile ngokufudumele uvakashele imboni yami ukusungula ukubambisana okuhle nesikhathi eside.
- Ukuvuselelwa kweWonderfu